Fandrobana sy fandorana : Talentan’ny TGV sy ny TIM -
AccueilRaharaham-pirenenaFandrobana sy fandorana : Talentan’ny TGV sy ny TIM
Nitohy tany Antsirabe ilay voalaza fa fitsaram-bahoaka nahazo ilay mpandraharaha tany Betafo araka ny fanampim-baovao azo. Fitenenana entina hanalokalofana ny heloka fotsiny ihany anefa ity hoe “fitsaram-bahoaka” ity fa fandrobana sy fandorana tsotra izao raha ny tena marina. Nanomboka oviana tokoa moa no nahazo vahana teto ity resaka fandrobana sy fandorana ity, taorian’ny taona 1972?
Tsy afaka miala amin’ny tantara isika rehefa miresaka fandrobana sy fandorana tanàna, trano fonenana, tranombarotra ary magazay. Ny taona 1972 no azo ambara ho nitrangan’izany fandrobana sy fandorana izany voalohany ka nahamay kila forehitra ny lapan’ny tanàna tamin’izany fotoana. Niova endrika kosa izany taty amin’ny taona 2002, ary tafiditra ho isan’ny paikady nentina nandrodana fitondrana mihitsy.
Paikady nentin’ny TIM nampandosirana ireo mpomba ny amiraly Didier Ratsiraka niala an’Antananarivo ilay hetsika fandrobana sy fandorana trano fonenana nampitondran’izy ireo ny anarana hoe “hazalambo”. Marc Ravalomanana mihitsy no nampiasa sy namorona io fitenenana hoe “hazalambo” io, ary mbola nampitondraina ny anaran’ireo mersenera mitam-piadiana, fantatra tamin’ny hoe “Zanadambo”, namono olona, nandroba, nanolana zaza amam-behivavy nanerana ny Nosy.
Nihobian’ireo mpomba an’i Marc Ravalomanana teny amin’ny kianjan’ny 13 Mai mihitsy tamin’izany fotoana ny fandrobana sy ny fandorana ny tranon’ireo mpomba ny amiraly Didier Ratsiraka, toa ny trano fonenan’ny ben’ny tanàna teo aloha Guy Willy Razanamasy, ny minisitra Tsaranazy, ny talen’ny kabinetran’ny prezidansa Gerard Andriamilerovason, ny mpanolotsaina manokana José Andrianoelison, sns.
Nampiasa io paikady maloto sy mamohehitra io ihany koa ny TGV ny taona 2009, ka lasibatra tamin’izany ny trano fonenan’ny mpanolotsaina Moxe Ramandimbilahatra, ny PDS teo aloha Guy Rivo ary niitatra tany amin’ny fandrobana ny TIKO sy ny MAGRO ary ireo tranombarotra maro nanerana ny Faritany enina. Nodorana ny RNM sy ny TVM, notafihana sy norobaina ny MBS ary ireo hainoamanjerin’i Marc Ravalomanana, tahaka ny nandorana sy nandrobana ihany koa ny Radio Tsioka Vao ny taona 2002.
Ny TGV sy ny TIM raha tsorina ny resaka no nanabe ny vahoaka ho amin’izany fandrobana sy fandorana izany ary tena talentan’ireto antoko politikan’i Marc Ravalomanana sy Andry Rajoelina mihitsy izany. Tsy mahagaga raha lasa fomba amam-panaon’ny olona sasany ity fandrobana miharo fandorana ity, satria izany no nitaizan’ireo antoko nahazo fitondrana teto nandritra ny 11 taona (2002-2013). Sarotra mihoatra lavitra noho ny fanarenana ara-toekarena ny fanarenana foto-pisainana izay mitady hahazo faka lalina tokoa vokatr’izay fitaizana ara-politika nampiasain’ny TGV sy ny TIM nandrombahana fahefana izay.